नेपाल Archives - Pardeshi Khabar
६ असोज, काठमाडौं । निजी लगानीको वायुसेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सले ८५ वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई ५ सय रुपैयाँ मात्र भाडामा सेवा दिने भएको छ । कम्पनीका अनुसार यो १२ असोज २०७६ बाट लागु हुने भएको छ । प्रतिउडान दुई जना जेष्ठ नागरिकले उक्त छूट मूल्यमा सेवा प्राप्त गर्ने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । कम्पनीका प्रवन्धक अनिल मानन्धरका अनुसार ७५ वर्षभन्दा माथिको उमेरका जेष्ठ नागरिकलाई भने इन्धनको मूल्य र करबाहेक भाडामा ५० प्रतिशत छूटको अफर ल्याइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई ५०फुर्सदमा
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: September 15, 2019
२९ भदौ, काठमाडौं । पछिल्लो समय आफ्नो घर बहालमा लगाउने घरबेटीले भाडावालसँग चर्को दरमा विद्युत महसुल उठाउने गरेको पाइएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले तोकिएको भन्दा बढी दरमा भाडावालासँग महसुल नलिन घरबेटीसँग आग्रह गरे । आइतबार प्राधिकरणद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले भने, ‘तोकिएको भन्दा बढी दरमा भाडा असुल्नु गैरकानूनी हो । प्राधिकरणसँग निश्चित दरमा किनेको बिजुली त्योभन्दा बढीमा बेचेर व्यापार गर्न पाइँदैन ।’ उनले घर बहालमा बस्नेहरुलाई विजुलीको दर/रेटबारे जानकारी लिएर त्योभन्दा बढी नतिर्न आग्रह गरे । प्राधिकरणले खपतका आधारमा प्रतिफुर्सदमा
२६ भदौ काठमाडौं l मासिक १० हजार रुपैयाँ तलब नपाउने मजदुरबाट जबर्जस्ती एक प्रतिशत कर उठाउने सरकारले कूटनीतिक नियोगमा लाखौं रुपैयाँ बुझ्ने कर्मचारीलाई भने कर मिनाहा दिने तयारी गरेको छ। आयकर ऐनले कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिने वैदेशिक भत्तामा ७५ प्रतिशत छुट र बाँकी २५ प्रतिशतमा पारिश्रमिक कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनले तोके पनि १० वर्षदेखि नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीले पारिश्रमिक कर तिरेका छैनन्। अहिले यस्तो करको रकम १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यही करबापतको रकम मिनाहा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ।फुर्सदमा
संस्कृतिविद् जोशीकाे तस्वीर अंकित २५ सयकाे सिक्का सार्वजनिक
भदौ २४, काठमाण्डौl नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको तस्वीर अंकित सय, हजार र २५ सय दरका सिक्का सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा जोशीको जन्म शताब्दीको अवसर पारी ती सिक्का सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाली संस्कृतिमा महाविद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरेका जाेशीले विगत चार दशकदेखि विभिन्न नेपाली नोटमा अंकित चित्रहरुको सांगोपाँगो अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकलाई दिँदै आएका थिए । साेही सुझावको कदर स्वरुप राष्ट्र बैंकले उनको तस्वीर अंकित सिक्का सार्वजनिक गरेको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकको शुद्धीकरणमा जाेशीले पुर्याएकाे योगदानको कदर गरी राष्ट्र बैंकलेफुर्सदमा
राई विद्यार्थी संघ विभाजित, रामचन्द्र राईको नेतृत्वमा छुट्टै समिति घोषणा
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: September 4, 2019
दमक, झापाl एउटै उद्देश्य र नामसहितको प्रदेश नं १ लाई किरात प्रदेश नामाकरण गराउने राजनीतिक संघर्षमा रहेका यायोक्खा अन्तर्गतका किरात राई विद्यार्थी संघ विभाजित भइ दुई अलग–अलग संगठन बनेको छ l गत वैशाखमा खोटाङमा सम्पन्न संघको ९औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जितेन राईको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरिएको थियो तर, बुधबार झापाको दमकमा भेला भएका विद्यार्थीहरुले ११ बुँदे दमक घोषणापत्र सहित रामचन्द्र राईको अध्यक्षतमा ५७ सदस्यीय अर्को समिति घोषणा गरेका छन् । नवगठित समितिको तर्फबाट जारी ‘११ बुँदे दमक घोषणापत्र’ जस्ताको तस्तै दमक घोषणापत्र २०७६ १. पहिचानसहितको किरात स्वायत्त राज्य निर्माणका लागिफुर्सदमा
नेपाल ताजा खबर, बिशेष समाचार No Comments »
विदेश जानेलाई वैंक खाता अनिवार्य, अन्यथा श्रम स्वीकृति नपाइने
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: September 2, 2019
काठमाडौं, भदौ १६। तपाई वैदेशिक रोजगारमा जाने योजनामा हुनुहुन्छ ? आफ्नै नाममा वा नजिकको आफन्तको नाममा वैंक खाता छ की छैन ? यदि छैन भनें तपाईले आजदेखि अन्तिम श्रम स्वीकृति पाउनु हुनेछैन । वैदेशिक रोजगार विभागले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन वैंक खातालाई सोमवार देखि अनिवार्य बनाएको छ । विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईंका अनुसार सरकारले हुण्डीलाई रोक्दै वैंकिङ च्यानल मार्फत रकम भित्रिने व्यवस्थाका लागि वैंक खाता अनिवार्य गरेको हो । यसैगरी यसले रकमको विषयमा परिवारमा हुनसक्ने विवाद पनि न्यूनिकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशक गुरागाईले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले अन्तिम श्रमफुर्सदमा